Iapile ikhupha iVidiyo eNtsha yoMculo weApple, Ukukhuthaza amagcisa amaninzi | Ndisuka mac
Iapile ikhupha iVidiyo eNtsha yoMculo weApple, ikhuthaza amagcisa amaninzi
Zimbalwa iiyure ezidlulileyo, UApple ukhuphe ividiyo entsha yokwazisa yeApple Music. Ngesi sihlandlo, abalinganiswa abaphambili ngamagcisa. Kwividiyo yesibini-yesibini, uninzi lwamaqweqwe ealbham kunye namagcisa avela, ajoyine imifanekiso enamandla ngevolumu ephezulu. Sibona kwividiyo, izembozo zamagcisa ngokwahluka: I-Sia, i-FKA Amagqabi, iKesha, iFleetwood Mac, phakathi kwabanye.
I-Apple isandula ukwaziswa iwotsOS 4.1. ngokongezwa kweApple Music kwiApple Watch. Eli nyathelo ngokungathandabuzekiyo liya kukhulisa inani lababhalisi kwiApple Music. Ukusukela ngoku ukuya phambili kuya kuba nakho ukufikelela kuyo yonke ikhathalogu yomculo, ngaphandle kokuxhomekeka ekubukeni kweApple. Impumelelo xa usendleleni, ngokwenza umthambo okanye ngokulula xa usuka kwisixhobo sakho esiphathwayo.
Nangona kunjalo, siyathemba ukubona iindaba ezingakumbi kwinkonzo ka-Apple, kuba abaphathi benkonzo yokusasaza ngokwabo baxele ngaphezulu kwesihlandlo esinye ukuba bafuna ukwenza into eyahlukileyo kwezinye iinkonzo zokusasaza, esiyaziyo namhlanje. Mhlawumbi le kuphela kwendlela yokusika abasebenzisi kwiSpotify, enabasebenzisi abangaphezu kwezigidi ezingama-60 kwihlabathi liphela, xa kuthelekiswa nezigidi ezingama-30, ezivezwe yiApple.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » Iapile ikhupha iVidiyo eNtsha yoMculo weApple, ikhuthaza amagcisa amaninzi
UAndres Ramirez1 sitsho
Ngaphandle kwamathandabuzo, iApple yenza umsebenzi omkhulu kwihlabathi lomculo, ikakhulu ngenxa yokuba iyaqhubeka nokukhupha iividiyo zomculo kwaye isebenze namagcisa amakhulu kolu shishino kwihlabathi liphela ...
Iibbs zokukhanya ze-IKEA ekugqibeleni ziyahambelana ne-Apple HomeKit
Fometha ukuphazamiseka xa ungenisa iifoto kwiifoto zeMacOS